चितवनमा शिकारीले फेरी अर्काे गैँडा मारे – Saurahaonline.com
चितवनमा शिकारीले फेरी अर्काे गैँडा मारे
चितवन : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको लौखानीस्थित टापु क्षेत्रमा एक दिन गोली चलेको आवाज सुनियो। त्यसको पाँच दिनपछि गत साता एउटा गैँडा मृत अवस्थामा फेला परेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डन अणनाथ बरालले बताए।
उक्त गैँडाको टाउकोमा प्वाल भएका कारण अवैध सिकारीले नै मारेको आशङ्का उनको छ।टाउकोमा प्वाल भएकै कारण निकुञ्जका प्राविधिकहरू गैँडालाई गोली हानिएको अनुमान गर्छन्।
तर मृत गैँडाको खाग र खुर नलगिएकाले सिकारीले जुन उद्देश्यले गैँडा मारेका थिए त्यो पूरा नभएको निकुञ्जका अधिकारीहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि सिकार शून्यमा झार्न सफल निकुञ्जमा गैँडा मारिनुको अर्थ सिकारीहरू पुनः सलबलाएको हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई अधिकारीहरूले चुनौतीको रूपमा लिएका छन्।
गैँडा मारेको आरोपमा पक्राउ परेका कैयौँ व्यक्तिहरू छुटेकाले उनीहरू नै पुनः गैँडाको अवैध सिकारमा संलग्न भएको हुनसक्ने वार्डन बरालले बताए।
गैँडा मार्नुको उद्देश्य के हो ?
बहुमूल्य खागका लागि तस्करहरूले दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडालाई तारो बनाउने गरेको बताइन्छ।गैँडा मारेपछि तस्करहरूले खाग र खुर लग्ने गरेको वार्डेन बराल बताउँछन्।
गैँडा कालगतिले वा जुधेर मरेको अवस्थामा फेला परेको खण्डमा भने गैँडाको खाग र खुर निकालेर गैँडा खाल्डो खनेर गाड्ने चलन छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यस अघि २०७३ साल चैतमा एक गैँडा चोरीसिकारीका कारण मारिएको थियो।
त्यसपछि जुधेर, बूढो भएर वा अन्य अज्ञात कारणले मरे पनि चितवनमा सिकारीले गैँडा मार्न पाएका थिएनन्। निकुञ्जभित्र गैँडा मारिनुले संरक्षणमा चुनौती थपिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सरक्षण विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल बताउँछन्।
लामो समयसम्म शान्त रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैँडा संरक्षणको लागि निकुञ्ज कर्मचारी नेपाली सेना मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय सुराकी सञ्जालसँग समन्वय गरेर थप रणनीति अपनाउनुपर्ने निमित्त महानिर्देशक कँडेलले बताए।
कहाँ जान्छ खाग ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाग महँगोमा बिक्री हुन्छ। गैँडाको मुख्य बजार चीन रहेको र केही मात्रामा खाडी मुलुकमा पनि जाने गरेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व वार्डन कमलजङ्ग कुँवरले बताए।
चीनमा गैँडाको खाग प्रतिकिलो ८० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म विक्री हुने अनुमान गरिएको छ। चीनमा दुर्लभ वन्य जन्तुहरू गैँडाको खाग, बाघको हड्डी, सालक र यार्सागुम्बा यी चार चिजलाई बढी महत्त्व दिने गरिएको पूर्व वार्डेन कुँवरले बताए।
ती वस्तुहरू चीनमा परम्परागत औषधि बनाउन प्रयोग गर्ने गरिएको बताइन्छ। अहिले नेपालमा ६४५ वटा गैँडा रहेका छन्। तीमध्ये चितवनमा ६०५, बर्दियामा २९, शुक्लाफाँटमा सात र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चारवटा छन्। BBC